बियोन्सीले जन्माईन् जुम्ल्याहा बच्चा
हलिउड गायिका बियोन्सीले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बियोन्सीले जन्माएको बच्चा छोरा वा छोरी भन्ने अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। उनले गत साता अमेरिकाको एक हस्पिटलमा जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी हुन्।
गायिका बियोन्सी र उनको श्रीमान जे जेडले सन् २००८ मा विवाह गरेका थिए। उनीहरूको पाँच वर्षको एक छोरीसमेत छन्। गत फेब्रुअरीमा बियोन्सीले आफू गर्भवती भएको तस्विर सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
बियोन्सीको बुवाले ट्वीटरमा पोस्ट गर्दै जुम्ल्याहा नातीको स्वागत गरेका छन्। उनले ट्वीटरमा बेलुनको तस्वीर हाल्दै लेखेका छन्,‘तिमीहरू यहाँ छौ, जन्मदिनको शुभकामना मेरो जुम्ल्याहा नातीहरू। धेरै माया, तिमीहरुको हजुरबुबा।’
बियोन्सी मनोरञ्जन संसारका १०० धनीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छिन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ९, २०७४ ११:०९:००
प्रियंका कमेडी शो मा जजको भूमिकामा
युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिएका ३ गीत, ५ वर्ष राज गरेको ‘गङनम स्टाइल’ कहाँ पुग्यो?
बियोन्सेको जीवनमा आधारित वृत्तचित्र बन्ने
एन्जोलिना किन रुन्थिन् बाथरुममा ?
किम कार्डाशियन जुम्ल्याहा बच्चाको आमा बन्दै
जस्टिन बीबरले गरे ‘पर्पस वर्ल्ड टुर’ कार्यक्रम रद्द